တိုင်းရင်းသားနှင့်နိုင်ငံသား အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် တိုငျးရငျးသားနှငျ့နိုငျငံသား အဓိပ်ပာယျဖှငျ့ဆိုခကျြ – Federal Journal
တိုင်းရင်းသားနှင့်နိုင်ငံသား အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် တိုငျးရငျးသားနှငျ့နိုငျငံသား အဓိပ်ပာယျဖှငျ့ဆိုခကျြ
“တိုင်းရင်းသား” နဲ့ “နိုင်ငံသား” ဘာကွာသလဲ။ တိုင်းရင်းသားဆိုတာဘာလဲ။ နိုင်ငံသားဆိုတာဘာလဲ။ ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုထားသလဲ။ ဦးစွာပေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေကို ဖြေရှင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ “တိုင်းရင်းသား၊ နိုင်ငံသား” ဆိုတဲ့ကိစ္စက သိပ်ပြီး အရေးကြီးနေတဲ့ ကိစ္စရပ်ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
ဦးစွာ “တိုင်းရင်းသားဆိုတာဘာလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကိုဖြေပေးရမယ်ဆိုရင် ၁၉၈၂-ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေအခန်း (၂) နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း ပုဒ်မ-၃ မှာ “နိုင်ငံတော်တွင်ပါဝင်သော နယ်မြေတစ်ခုခု၌ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၈၂၃-ခုနှစ် မတိုင်မီကာလမှစ၍ ပင်ရင်းနိုင်ငံအဖြစ်အမြဲနေထိုင်ခဲ့သော ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း စသည့်တိုင်းရင်းသားများနှင့်မျိုးနွယ်စု များသည် မြန်မာနိုင်ငံသားများဖြစ်သည်” လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ ပုဒ်မ-၄ မှာတော့ “မည်သည့်မျိုးနွယ်စုသည် တိုင်းရင်းသားဖြစ် သည်၊ မဖြစ်သည်ကို နိုင်ငံတော်က ဆုံးဖြတ်မည်” ဟုလည်းကောင်း၊ ပုဒ်မ-၅ တွင် “တိုင်းရင်းသားတိုင်းသည်လည်းကောင်း၊ တိုင်းရင်းသားမိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသူတိုင်းသည်လည်းကောင်း မွေးဖွားရာပါ နိုင်ငံသားများဖြစ်သည်” ဟု ဆိုထားပါသည်။ ထို့အပြင် ၂၀၀၈-ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အခန်း-၈၊ ပုဒ်မ-၃၄၅(က) တွင် တိုင်းရင်း သားမိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားလာသူများဟာ နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
၁၉၄၈-ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးအချိန်က တိုင်းရင်းသားလူမျိုး (၁၄၄) မျိုး၊ နောက် ၁၉၈၃-ခုနှစ် သတင်းဆောင်းပါးရှင် တစ်ဦးရဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး (၁၃၅) မျိုးဆိုပြီး ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ခြင်းမျိုးပဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၄-ခုနှစ် သန်ခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှုမှာတော့ ဒီတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုကြီး (၈) မျိုးကို အခြေခံပြီး တစ်မျိုးစီအလိုက် မျိုးနွယ်စုငယ်လေးတွေခွဲပြီး တိုင်းရင်းသားလူမျိုး (၁၃၅)မျိုးနဲ့ စာရင်းကောက်ယူခဲ့တာ တွေ့ရှိရပါတယ်။ ၂၀၁၄-ခုနှစ် သန်ခေါင်စာ ရင်းကောက်ယူမှုမှာ လူမျိုးအလိုက် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ နံပါတ်တွေပေးထားတဲ့အတွက် မိမိလူမျိုးအမည်ကို တိတိကျကျ ဖော်ပြ ခွင့်တော့ ရခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီ ၂၀၁၄ သန်ခေါင်စာရင်းရလာဒ်အရ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုပေါင်း (၈၀၀) ကျော်ရှိတယ် လို့ လူဦးရေနဲ့ လူမျိုးထုတ်ပြန်ကြေညာပွဲမှာ အရိပ်အမြွက်ပြောဆိုခြင်းမျိုးပဲရှိခဲ့ပြီး အတိအကျတော့ အခုချိန်ထိ ထုတ်ပြန်ကြေညာ ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်တိုင်းရင်းသားဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ခရစ်နှစ် ၁၈၂၃-မတိုင်မီ အရင်ကတည်းကပင် ယင်းနိုင်ငံ အဖြစ်နေထိုင်လာခဲ့တဲ့ ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ ဗမာ၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း စတဲ့လူမျိုးများနှင့်မျိုးနွယ်စုများကို ခေါ်ကြောင်း အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလို့ရပါတယ်။
နိုင်ငံသားဆိုတာဘာလဲ။ နိုင်ငံသားဆိုတာဘာလဲဆိုတာကို ဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့ ၁၉၈၂-ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေ အခန်း-၁၊ ပုဒ်မ-၂(က)မှာ “နိုင်ငံသားဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသားကိုဆိုလိုသည်” လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အခန်း-၂၊ ပုဒ်မ-၅ မှာတော့ “တိုင်းရင်းသားမိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားလာသူတိုင်းဟာ နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်” လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ပုဒ်မ-၆ မှာတော့ “ဤဥပဒေတည်သောနေ့တွင် နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသူတိုင်းသည် နိုင်ငံသားဖြစ်သည်” လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ၂၀၀၈-ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ-၃၄၅ တွင် “အောက်ဖော်ပြပါအရည်အချင်းနှင့်ပြည်စုံသူများသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြသည်။ (က) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ တိုင်းရင်းသားမိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားသူ (ခ) ဤဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအတည်ပြုသည့်နေ့တွင် ဥပဒေအရ နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသူ” လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၁၉၈၂-ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ သားဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာ နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသူများကလည်း နိုင်ငံသားများဖြစ်တယ်ဆိုတာ ထင်ရှားပေါ်လွင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်နိုင်ငံသားဆိုတာ တည်ဆဲဥပဒေများအရ တိုင်းရင်းသားတိုင်းသည် နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ဆိုတာရယ်၊ “ဤဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီး တဲ့အချိန်မှာ နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပြီးသားဖြစ်သူများဟာ နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်” ဆိုခြင်းကြောင့် တိုင်းရင်းသားအားလုံးကို နိုင်ငံသားလို့ ခေါ်ဆိုနိုင်သလို၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးတဲ့နေ့မှာ နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသူများကိုလည်း “နိုင်ငံသားများ” လို့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ အဓိကအရေးပါဆုံးကတော့ နိုင်ငံရဲ့လူဦးရေပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူဦးရေဆိုတဲ့အခါမှာလည်း လူမျိုးတို့၊ ဘာသာတို့၊ အဆင့်အတန်းတို့ ခွဲခြားလို့မရဘဲ နိုင်ငံအတွင်းမှီတင်းနေထိုင်တဲ့သူအားလုံးကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ လူဦးရေသာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ ခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရယ်လို့ တခမ်းတနားတည်တည်တံ့တံ့ရှိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါ ဘူး။ နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့မူလသဘောတရား နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ပထမသဘောတရားကတော့ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ မျိုးရိုးအတိအကျ ကို မိဘနှစ်ပါး၊ သို့မဟုတ် မိဘတစ်ဦးဦးရဲ့မျိုးရိုးအရ ဆုံးဖြတ်ခြင်းမျိုးပါ။ မိဘနှစ်ပါးလုံး ဒါမှမဟုတ်ရင် တစ်ဦးဦးက နိုင်ငံသားဖြစ်ခဲ့ ရင် ကလေးကို ဘယ်အရပ်ဒေသမှာ မွေးဖွားတာဖြစ်နေပါစေ အဲဒီကလေးဟာ မွေးဖွားသူမိဘ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုအရ ဒီကလေးဟာ နိုင်ငံသားအဖြစ်ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့သွေးကိုလိုက်ပြီး ဆုံးဖြတ်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်နည်းကတော့ မိဘရဲ့ မျိုးရိုး၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကို ထည့်မတွက်တော့ဘဲ ကလေးမွေးဖွားရာနိုင်ငံ၊ အရပ်ဒေသကိုသာအစွဲပြုပြီး ဆုံးဖြတ်တဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါ တယ်။ ဒီနည်းအရဆိုရင် နိုင်ငံခြား၊ လူမျိုးခြားကလေးဆိုပေမယ့်လည်း နိုင်ငံအတွင်းမှာ မွေးဖွားခဲ့ရင် အဲဒီနိုင်ငံသားအဖြစ် ခံယူခွင့် ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက ဒီနည်းတစ်နည်း သို့မဟုတ် တစ်နည်းကိုတော့ အသုံးပြုကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ နိုင်ငံသားအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံဖို့အရေး အတော်ကိုရှုပ်ထွေးမှုတွေရှိနေတာကို တွေ့ရှိရမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ နိုင်ငံမှာ မူလနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လူမျိုးတွေရှိသလို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အခြားတိုင်းပြည်ကနေ လာရောက်နေထိုင်သူ တွေလည်းရှိပါတယ်။ အခြားနိုင်ငံမှာ အခြေချနေထိုင်သူများဟာ မြန်မာဘုရင်များလက်ထက်၊ နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်အစိုးရလက်ထက်၊ လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးအချိန်ထိ ခေတ်အဆက်ဆက်နေထိုင်ခဲ့ကြသူများလည်း အများအပြားရှိကြပါတယ်။ အချို့လည်း အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့အစိုးရလက်ထက် အိန္ဒိယတိုက်ငယ်အဖြစ် တည်ရှိချိန်ဝင်ရောက်လာသူများလည်း ရှိပါတယ်။ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် နေထိုင်ခဲ့ကြသူများဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလူတွေအနေနဲ့ နိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားရာမှာ အခက်အခဲမျိုးစုံရှိနေတာကို တွေ့ရှိရ ပါတယ်။ ဘာသာအပေါ်အခြေခံထားတဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်တည်မှုအဖြစ် တွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။
၁၉၈၂ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေမှာ နိုင်ငံသားတစ်ဦး၊ သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားမိဘနှစ်ပါးမှ မွေးဖွားလာသူများဟာ နိုင်ငံသားဖြစ် တယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပေမယ့် နိုင်ငံသားမိဘနှစ်ပါး နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ကိုင်ထားသူ မိဘနှစ်ပါးမှမွေးဖွားသော ကလေးဖြစ်စေ ကာမူ ဘာသာအပေါ်အခြေခံ၍ နိုင်ငံသားဖြစ်တည်မှုကို ငြင်းပယ်ခံရတာတွေ နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ လျှောက်ထားရာမှာ နှစ်နဲ့ချီပြီး စစ်ဆေးနေတာ၊ ကြန့်ကြာနေတာတွေကို တွေ့ရှိနေရပါတယ်။ နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ကတ်ပြားထုတ်ပေးရာမှာလည်း လူမျိုးကို အခြေမခံဘဲ အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် စတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုခုရဲ့အမည်ကို လူမျိုးနေရာမှာ အတင်းကိုယ်စားပြုထည့် ရေးခိုင်းနေတာကိုလည်း တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ခုခုတော့ မှားယွင်းနေပြီး နိုင်ငံသားဖြစ်တည်မှုကို အဟန့်အတားဖြစ် စေတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေကို ပြည့်ပြည့်ဝဝပေးထားတာ တွေ့ရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မဲပေးပိုင်ခွင့်၊ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် . . . စတဲ့အခွင့်အရေးတွေကို ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၈-ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ-၃၄၈ မှာဆိုရင် နိုင်ငံတော်သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ မည်သည့်နိုင်ငံသားမျှလူမျိုး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊ ရာထူးဌာနန္တရ၊ အဆင့်အတန်း၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ဆင်းရဲချမ်းသာတို့ကို အကြောင်းပြု၍ ခွဲခြားမှုမရှိစေရဆိုထား ပြီး၊ ပုဒ်မ-၃၅၂ တွင် နိုင်ငံတော်သည်အလုပ်အကိုင်ခန့်ထားရာတွင်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံဝန်ထမ်းရွေးချယ်တာဝန်ပေးရာတွင်ဖြစ်စေ သတ်မှတ်ထားသောအရည်အချင်းနှင့်ပြည့်စုံပါက ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ မည်သည့်နိုင်ငံသားကိုမျှ လူမျိုး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာသာသနာ၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးကို အကြောင်းပြုလျှက် ရာထူးရွေးချယ်ခန့်ထားခြင်းမျိုးကို ခွဲခြားမှု မပြုရလို့ ဆိုထားပေမဲ့ လူမျိုး၊ ဘာသာကို အကြောင်းပြုပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေ ပြုလုပ်နေတာတွေကို တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံဝန်ထမ်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ လျှောက်ထားခြင်းပြုတဲ့အချက်မှာ ဘာသာအပေါ်အခြေခံပြီး ငြင်းပယ်ခံနေရတာတွေအများ အပြားပါ။ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းကြားထဲမှာလည်း ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာအပေါ်အခြေခံပြီး ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းမရှိသေးတာတွေကိုလည်း တွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်၊ မဲပေးပိုင်ခွင့်တွေ ငြင်းပယ်ခံနေရပြီး၊ နိုင်ငံရေးပါတီများမှာလည်း လူမျိုး၊ ဘာသာအပေါ် အခြေခံပြီး ခွဲခြားဆက်ဆံနေတာကို တွေ့ရှိနေရပါတယ်။
ဒါတွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေသလဲဆိုရင် ဥပဒေကို တိတိကျကျလေးစားလိုက်နာမှုမရှိခြင်း၊ တိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့အမည်နာမ အပေါ်အခြေခံထားခြင်း၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုမည်မျှရှိသည်ကို အတိအကျထုတ်ပြန်ထားမှုမရှိခြင်း၊ ဘာသာတရားအပေါ် အခြေခံ ထားလွန်းခြင်း၊ နိုင်ငံသားအဖြစ်သတ်မှတ်ရာတွင်လည်း ဘာသာတရားအပေါ်အခြေခံပြီး နိုင်ငံသားဖြစ်တည်မှုကို ဆောင်ရွက်နေ ခြင်း စတဲ့အချက်တွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
“တိုငျးရငျးသား” နဲ့ “နိုငျငံသား” ဘာကှာသလဲ။ တိုငျးရငျးသားဆိုတာဘာလဲ။ နိုငျငံသားဆိုတာဘာလဲ။ ဘယျလိုအဓိပ်ပာယျ ဖှငျ့ဆိုထားသလဲ။ ဦးစှာပေးထားတဲ့မေးခှနျးတှကေို ဖွရှေငျးပေးမှာဖွဈပါတယျ။ “တိုငျးရငျးသား၊ နိုငျငံသား” ဆိုတဲ့ကိစ်စက သိပျပွီး အရေးကွီးနတေဲ့ ကိစ်စရပျဖွဈနလေို့ပါပဲ။
ဦးစှာ “တိုငျးရငျးသားဆိုတာဘာလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခှနျးကိုဖွပေေးရမယျဆိုရငျ ၁၉၈၂-ခုနှဈ မွနျမာနိုငျငံသားဥပဒအေခနျး (၂) နိုငျငံသားဖွဈခွငျး ပုဒျမ-၃ မှာ “နိုငျငံတျောတှငျပါဝငျသော နယျမွတေဈခုခု၌ မွနျမာသက်ကရာဇျ ၁၈၂၃-ခုနှဈ မတိုငျမီကာလမှစ၍ ပငျရငျးနိုငျငံအဖွဈအမွဲနထေိုငျခဲ့သော ကခငျြ၊ ကယား၊ ကရငျ၊ ခငျြး၊ ဗမာ၊ မှနျ၊ ရခိုငျ၊ ရှမျး စသညျ့တိုငျးရငျးသားမြားနှငျ့မြိုးနှယျစု မြားသညျ မွနျမာနိုငျငံသားမြားဖွဈသညျ” လို့ ပွဋ်ဌာနျးထားပါတယျ။ ပုဒျမ-၄ မှာတော့ “မညျသညျ့မြိုးနှယျစုသညျ တိုငျးရငျးသားဖွဈ သညျ၊ မဖွဈသညျကို နိုငျငံတျောက ဆုံးဖွတျမညျ” ဟုလညျးကောငျး၊ ပုဒျမ-၅ တှငျ “တိုငျးရငျးသားတိုငျးသညျလညျးကောငျး၊ တိုငျးရငျးသားမိဘနှဈပါးမှ မှေးဖှားသူတိုငျးသညျလညျးကောငျး မှေးဖှားရာပါ နိုငျငံသားမြားဖွဈသညျ” ဟု ဆိုထားပါသညျ။ ထို့အပွငျ ၂၀၀၈-ခုနှဈ ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံတျော ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒေ အခနျး-၈၊ ပုဒျမ-၃၄၅(က) တှငျ တိုငျးရငျး သားမိဘနှဈပါးမှ မှေးဖှားလာသူမြားဟာ နိုငျငံသားဖွဈတယျလို့ ဖျောပွထားပါတယျ။
၁၉၄၈-ခုနှဈ လှတျလပျရေးရရှိပွီးအခြိနျက တိုငျးရငျးသားလူမြိုး (၁၄၄) မြိုး၊ နောကျ ၁၉၈၃-ခုနှဈ သတငျးဆောငျးပါးရှငျ တဈဦးရဲ့ တိုငျးရငျးသားလူမြိုး (၁၃၅) မြိုးဆိုပွီး ချေါဝျေါခဲ့ခွငျးမြိုးပဲ ရှိခဲ့ပါတယျ။
၂၀၁၄-ခုနှဈ သနျခေါငျစာရငျးကောကျယူမှုမှာတော့ ဒီတိုငျးရငျးသားလူမြိုးစုကွီး (၈) မြိုးကို အခွခေံပွီး တဈမြိုးစီအလိုကျ မြိုးနှယျစုငယျလေးတှခှေဲပွီး တိုငျးရငျးသားလူမြိုး (၁၃၅)မြိုးနဲ့ စာရငျးကောကျယူခဲ့တာ တှရှေိ့ရပါတယျ။ ၂၀၁၄-ခုနှဈ သနျခေါငျစာ ရငျးကောကျယူမှုမှာ လူမြိုးအလိုကျ မိမိကွိုကျနှဈသကျရာ နံပါတျတှပေေးထားတဲ့အတှကျ မိမိလူမြိုးအမညျကို တိတိကကြ ဖျောပွ ခှငျ့တော့ ရခဲ့ကွပါတယျ။ ဒီ ၂၀၁၄ သနျခေါငျစာရငျးရလာဒျအရ မွနျမာနိုငျငံမှာ တိုငျးရငျးသားလူမြိုးစုပေါငျး (၈၀၀) ကြျောရှိတယျ လို့ လူဦးရနေဲ့ လူမြိုးထုတျပွနျကွညောပှဲမှာ အရိပျအမွှကျပွောဆိုခွငျးမြိုးပဲရှိခဲ့ပွီး အတိအကတြော့ အခုခြိနျထိ ထုတျပွနျကွညော ခွငျး မရှိသေးပါဘူး။ ဒါကွောငျ့တိုငျးရငျးသားဆိုတာ မွနျမာနိုငျငံအတှငျး ခရဈနှဈ ၁၈၂၃-မတိုငျမီ အရငျကတညျးကပငျ ယငျးနိုငျငံ အဖွဈနထေိုငျလာခဲ့တဲ့ ကခငျြ၊ ကယား၊ ကရငျ၊ ခငျြး၊ ဗမာ၊ မှနျ၊ ရခိုငျ၊ ရှမျး စတဲ့လူမြိုးမြားနှငျ့မြိုးနှယျစုမြားကို ချေါကွောငျး အဓိပ်ပာယျဖှငျ့ဆိုလို့ရပါတယျ။
နိုငျငံသားဆိုတာဘာလဲ။ နိုငျငံသားဆိုတာဘာလဲဆိုတာကို ဖွရေမယျဆိုရငျတော့ ၁၉၈၂-ခုနှဈ မွနျမာနိုငျငံသားဥပဒေ အခနျး-၁၊ ပုဒျမ-၂(က)မှာ “နိုငျငံသားဆိုသညျမှာ မွနျမာနိုငျငံသားကိုဆိုလိုသညျ” လို့ ဖျောပွထားပါတယျ။ အခနျး-၂၊ ပုဒျမ-၅ မှာတော့ “တိုငျးရငျးသားမိဘနှဈပါးမှ မှေးဖှားလာသူတိုငျးဟာ နိုငျငံသားဖွဈတယျ” လို့ ဖျောပွထားပါတယျ။ ပုဒျမ-၆ မှာတော့ “ဤဥပဒတေညျသောနတှေ့ငျ နိုငျငံသားဖွဈပွီးသူတိုငျးသညျ နိုငျငံသားဖွဈသညျ” လို့ ဖျောပွထားပါတယျ။ ၂၀၀၈-ခုနှဈ ဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံဥပဒေ ပုဒျမ-၃၄၅ တှငျ “အောကျဖျောပွပါအရညျအခငျြးနှငျ့ပွညျစုံသူမြားသညျ ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံတျော၏ နိုငျငံသားမြားဖွဈကွသညျ။ (က) ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံတျော၏ တိုငျးရငျးသားမိဘနှဈပါးမှ မှေးဖှားသူ (ခ) ဤဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံဥပဒအေတညျပွုသညျ့နတှေ့ငျ ဥပဒအေရ နိုငျငံသားဖွဈပွီးသူ” လို့ ဖျောပွထားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ၁၉၈၂-ခုနှဈ မွနျမာနိုငျငံ သားဥပဒပွေဋ်ဌာနျးခဲ့ပွီးတဲ့အခြိနျမှာ နိုငျငံသားဖွဈပွီးသူမြားကလညျး နိုငျငံသားမြားဖွဈတယျဆိုတာ ထငျရှားပျေါလှငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့နိုငျငံသားဆိုတာ တညျဆဲဥပဒမြေားအရ တိုငျးရငျးသားတိုငျးသညျ နိုငျငံသားဖွဈတယျဆိုတာရယျ၊ “ဤဥပဒပွေဋ်ဌာနျးပွီး တဲ့အခြိနျမှာ နိုငျငံသားအဖွဈ အသိအမှတျပွုပွီးသားဖွဈသူမြားဟာ နိုငျငံသားဖွဈတယျ” ဆိုခွငျးကွောငျ့ တိုငျးရငျးသားအားလုံးကို နိုငျငံသားလို့ ချေါဆိုနိုငျသလို၊ ၂၀၀၈ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒအေတညျပွုပွဋ်ဌာနျးခဲ့ပွီးတဲ့နမှေ့ာ နိုငျငံသားဖွဈပွီးသူမြားကိုလညျး “နိုငျငံသားမြား” လို့ အဓိပ်ပာယျဖှငျ့ဆိုနိုငျပါတယျ။
နိုငျငံတဈနိုငျငံမှာ အဓိကအရေးပါဆုံးကတော့ နိုငျငံရဲ့လူဦးရပေဲဖွဈပါတယျ။ လူဦးရဆေိုတဲ့အခါမှာလညျး လူမြိုးတို့၊ ဘာသာတို့၊ အဆငျ့အတနျးတို့ ခှဲခွားလို့မရဘဲ နိုငျငံအတှငျးမှီတငျးနထေိုငျတဲ့သူအားလုံးကို ဆိုလိုတာဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ နိုငျငံတဈနိုငျငံမှာ လူဦးရသောမရှိဘူးဆိုရငျတော့ ခိုငျမာတဲ့နိုငျငံတဈနိုငျငံရယျလို့ တခမျးတနားတညျတညျတံ့တံ့ရှိနိုငျမှာ မဟုတျပါ ဘူး။ နိုငျငံသားဖွဈတဲ့မူလသဘောတရား နှဈမြိုးရှိပါတယျ။ ပထမသဘောတရားကတော့ ကလေးတဈယောကျရဲ့ မြိုးရိုးအတိအကြ ကို မိဘနှဈပါး၊ သို့မဟုတျ မိဘတဈဦးဦးရဲ့မြိုးရိုးအရ ဆုံးဖွတျခွငျးမြိုးပါ။ မိဘနှဈပါးလုံး ဒါမှမဟုတျရငျ တဈဦးဦးက နိုငျငံသားဖွဈခဲ့ ရငျ ကလေးကို ဘယျအရပျဒသေမှာ မှေးဖှားတာဖွဈနပေါစေ အဲဒီကလေးဟာ မှေးဖှားသူမိဘ နိုငျငံသားဖွဈမှုအရ ဒီကလေးဟာ နိုငျငံသားအဖွဈကို ရရှိမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါကတော့သှေးကိုလိုကျပွီး ဆုံးဖွတျတဲ့နညျးဖွဈပါတယျ။ နောကျတဈနညျးကတော့ မိဘရဲ့ မြိုးရိုး၊ နိုငျငံသားဖွဈမှုကို ထညျ့မတှကျတော့ဘဲ ကလေးမှေးဖှားရာနိုငျငံ၊ အရပျဒသေကိုသာအစှဲပွုပွီး ဆုံးဖွတျတဲ့နညျးပဲဖွဈပါ တယျ။ ဒီနညျးအရဆိုရငျ နိုငျငံခွား၊ လူမြိုးခွားကလေးဆိုပမေယျ့လညျး နိုငျငံအတှငျးမှာ မှေးဖှားခဲ့ရငျ အဲဒီနိုငျငံသားအဖွဈ ခံယူခှငျ့ ရှိပါတယျ။ ကမ်ဘာ့နိုငျငံအသီးသီးက ဒီနညျးတဈနညျး သို့မဟုတျ တဈနညျးကိုတော့ အသုံးပွုကွပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာတော့ နိုငျငံသားအဖွဈအသိအမှတျပွုခံဖို့အရေး အတျောကိုရှုပျထှေးမှုတှရှေိနတောကို တှရှေိ့ရမှာ ဖွဈပါ တယျ။ နိုငျငံမှာ မူလနထေိုငျခဲ့ကွတဲ့လူမြိုးတှရှေိသလို အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ အခွားတိုငျးပွညျကနေ လာရောကျနထေိုငျသူ တှလေညျးရှိပါတယျ။ အခွားနိုငျငံမှာ အခွခေနြထေိုငျသူမြားဟာ မွနျမာဘုရငျမြားလကျထကျ၊ နယျခြဲ့အင်ျဂလိပျအစိုးရလကျထကျ၊ လှတျလပျရေးရရှိပွီးအခြိနျထိ ခတျေအဆကျဆကျနထေိုငျခဲ့ကွသူမြားလညျး အမြားအပွားရှိကွပါတယျ။ အခြို့လညျး အင်ျဂလိပျနယျခြဲ့အစိုးရလကျထကျ အိန်ဒိယတိုကျငယျအဖွဈ တညျရှိခြိနျဝငျရောကျလာသူမြားလညျး ရှိပါတယျ။ ဘိုးစဉျဘောငျဆကျ နထေိုငျခဲ့ကွသူမြားဖွဈပါတယျ။ ဒီလူတှအေနနေဲ့ နိုငျငံသားအဖွဈလြှောကျထားရာမှာ အခကျအခဲမြိုးစုံရှိနတောကို တှရှေိ့ရ ပါတယျ။ ဘာသာအပျေါအခွခေံထားတဲ့ နိုငျငံသားဖွဈတညျမှုအဖွဈ တှမွေ့ငျနကွေရပါတယျ။
၁၉၈၂ မွနျမာနိုငျငံသားဥပဒမှော နိုငျငံသားတဈဦး၊ သို့မဟုတျ နိုငျငံသားမိဘနှဈပါးမှ မှေးဖှားလာသူမြားဟာ နိုငျငံသားဖွဈ တယျလို့ပွဋ်ဌာနျးထားပမေယျ့ နိုငျငံသားမိဘနှဈပါး နိုငျငံသားစိစဈရေးကတျကိုငျထားသူ မိဘနှဈပါးမှမှေးဖှားသော ကလေးဖွဈစေ ကာမူ ဘာသာအပျေါအခွခေံ၍ နိုငျငံသားဖွဈတညျမှုကို ငွငျးပယျခံရတာတှေ နိုငျငံသားဖွဈဖို့ လြှောကျထားရာမှာ နှဈနဲ့ခြီပွီး စဈဆေးနတော၊ ကွနျ့ကွာနတောတှကေို တှရှေိ့နရေပါတယျ။ နိုငျငံသားအဖွဈ အသိအမှတျပွု ကတျပွားထုတျပေးရာမှာလညျး လူမြိုးကို အခွမေခံဘဲ အိန်ဒိယ၊ ပါကစ်စတနျ၊ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ စတဲ့နိုငျငံတဈခုခုရဲ့အမညျကို လူမြိုးနရောမှာ အတငျးကိုယျစားပွုထညျ့ ရေးခိုငျးနတောကိုလညျး တှရှေိ့ရမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါဟာတဈခုခုတော့ မှားယှငျးနပွေီး နိုငျငံသားဖွဈတညျမှုကို အဟနျ့အတားဖွဈ စတောတှေ ဖွဈပါတယျ။
၂၀၀၈ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒမှော နိုငျငံသားအခှငျ့အရေးတှကေို ပွညျ့ပွညျ့ဝဝပေးထားတာ တှရှေိ့ရမှာ ဖွဈပါတယျ။ မဲပေးပိုငျခှငျ့၊ ရှေးခယျြပိုငျခှငျ့ . . . စတဲ့အခှငျ့အရေးတှကေို ပေးထားတာဖွဈပါတယျ။ ၂၀၀၈-ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒေ ပုဒျမ-၃၄၈ မှာဆိုရငျ နိုငျငံတျောသညျ ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံတျော၏ မညျသညျ့နိုငျငံသားမြှလူမြိုး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကှယျရာဘာသာ၊ ရာထူးဌာနန်တရ၊ အဆငျ့အတနျး၊ ယဉျကြေးမှု၊ အမြိုးသား၊ အမြိုးသမီး၊ ဆငျးရဲခမျြးသာတို့ကို အကွောငျးပွု၍ ခှဲခွားမှုမရှိစရေဆိုထား ပွီး၊ ပုဒျမ-၃၅၂ တှငျ နိုငျငံတျောသညျအလုပျအကိုငျခနျ့ထားရာတှငျဖွဈစေ၊ နိုငျငံဝနျထမျးရှေးခယျြတာဝနျပေးရာတှငျဖွဈစေ သတျမှတျထားသောအရညျအခငျြးနှငျ့ပွညျ့စုံပါက ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံတျော၏ မညျသညျ့နိုငျငံသားကိုမြှ လူမြိုး၊ ဇာတိ၊ ကိုးကှယျရာဘာသာသာသနာ၊ အမြိုးသား၊ အမြိုးသမီးကို အကွောငျးပွုလြှကျ ရာထူးရှေးခယျြခနျ့ထားခွငျးမြိုးကို ခှဲခွားမှု မပွုရလို့ ဆိုထားပမေဲ့ လူမြိုး၊ ဘာသာကို အကွောငျးပွုပွီး ခှဲခွားဆကျဆံမှုတှေ ပွုလုပျနတောတှကေို တှရှေိ့ရမှာဖွဈပါတယျ။ နိုငျငံဝနျထမျးတာဝနျထမျးဆောငျဖို့ လြှောကျထားခွငျးပွုတဲ့အခကျြမှာ ဘာသာအပျေါအခွခေံပွီး ငွငျးပယျခံနရေတာတှအေမြား အပွားပါ။ နိုငျငံ့ဝနျထမျးကွားထဲမှာလညျး ကိုးကှယျတဲ့ဘာသာအပျေါအခွခေံပွီး ရာထူးတိုးမွှငျ့ခွငျးမရှိသေးတာတှကေိုလညျး တှမွေ့ငျနကွေရပါတယျ။ ရှေးခယျြပိုငျခှငျ့၊ မဲပေးပိုငျခှငျ့တှေ ငွငျးပယျခံနရေပွီး၊ နိုငျငံရေးပါတီမြားမှာလညျး လူမြိုး၊ ဘာသာအပျေါ အခွခေံပွီး ခှဲခွားဆကျဆံနတောကို တှရှေိ့နရေပါတယျ။
ဒါတှဘောကွောငျ့ဖွဈနသေလဲဆိုရငျ ဥပဒကေို တိတိကကြလြေးစားလိုကျနာမှုမရှိခွငျး၊ တိုငျးရငျးသားဆိုတဲ့အမညျနာမ အပျေါအခွခေံထားခွငျး၊ တိုငျးရငျးသားလူမြိုးစုမညျမြှရှိသညျကို အတိအကထြုတျပွနျထားမှုမရှိခွငျး၊ ဘာသာတရားအပျေါ အခွခေံ ထားလှနျးခွငျး၊ နိုငျငံသားအဖွဈသတျမှတျရာတှငျလညျး ဘာသာတရားအပျေါအခွခေံပွီး နိုငျငံသားဖွဈတညျမှုကို ဆောငျရှကျနေ ခွငျး စတဲ့အခကျြတှကွေောငျ့ဖွဈပါတယျ။